बैशाख १७ गतेबाट आईपीओ निष्काशन गर्दै सिईडिबि हाइड्रोपावर, कति कित्ता ? – hamrosandesh.com
बैशाख १७ गतेबाट आईपीओ निष्काशन गर्दै सिईडिबि हाइड्रोपावर, कति कित्ता ?
सिईडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यही बैशाख १७ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि कुल जारी पूँजी ८३ करोड ९४ लाख १० हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुने २५ करोड १८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो ।
साथै अधिकतममा २५ लाख १८ हजार २३० कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।